डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा एमाले किन क्रूर ? – Tourism News Portal of Nepal
डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा एमाले किन क्रूर ?
जनताले जिताएपछि एमालेको फूर्ति ह्वात्तै बढ्यो । तर उसले जनताका डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्ता गरिरहेछ । जुन माग गोविन्द केसीका होइनन्, नितान्त गरिब जनताका माग हुन् । काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग एमालेले भन्दै आएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमकै एक अंश होइनन् ? एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको दल ठान्छ भने दूरदराजका गरिबका सन्तानले समेत पढ्न सकिने शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको माग गलत हो त ? धेरै नेपाली बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने इच्छा राख्छन् । छोराछोरीको पनि धेरैको त्यस्तै इच्छा हुन्छ ।
-फुर्पा तामाङ, अधिवक्ता, रसुवा